Sida loo rogo ama Guba iyo TV muujinaysaa in DVD
> Resource > DVD > Sida loo Guba TV muujiyaa in DVD
Maalmahan taxanaha TV waxa ay noqonayaan online iyo aad u badan la heli karaa. Si fudud waxaad ka heli kartaa jecel aad TV muujinaya on Netflix, Hulu, YouTube, VEVO, ama ilo kale oo lacag la'aan ah ama lacag bil kasta aad u yar yahay. Sidoo kale, ma tihid la'aanta qalab offline iyaga keeni badan oo software downloader ka dhacay suuqa maanta. Tusaale ahaan: Wondershare AllMyTube . Sidaas darteed, waxaa laga yaabaa in aad ku kaydsan farabadan of clips aad jeceshahay ama dhacdooyin xataa buuxa on your computer. Hadda waxa la joogaa wakhtigii si ay u gubaan muujinaya TV kuwaas oo si DVD oo bilaash ah aad disk adag ama cozily iyaga ku raaxaysan on TV.
In this article, aan dabooli doonaa hab fudud oo jirta in ay gubaan muujinaya TV si aad u DVD disc. Folder DVD, ISO file image abuurka ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa iyadoo ku xiran baahidaada. Taasi waa DVD abuura Wondershare . Waxay ka caawisaa si ay u gubaan kala duwan TV muujinaya in DVD leh tayo wanaagsan leh. Ka hor inta gubanaya, waxa kale oo aad isticmaali kartaa qalabka tafatirka ka mid ahaa oo lagu furdaamiyo iyo menu ay si shakhsi aad TV muujinaysaa DVD istareexsan. Haddii aad isticmaalayso Mac ah, si fudud u isticmaali Wondershare DVD Creator for Mac in waa hore u sameeyey. Hoos hage qaadataa shaashada Windows. Downlod Free version maxkamad ay halkan:
Fiiro gaar ah: Barnaamijkan ma taageeri TV ilaaliyo muujinaysaa in DVD abuurka. Fadlan isticmaal software dhinac saddexaad oo ah in marka hore meesha laga saaro ilaalinta DRM haddii ay muujinayso TV aad ka tirsan tahay DRM kuwa la ilaaliyo.
1 dejinta muujinaya TV aad
Ka dib markii aad barnaamijkan lagu rakibay on your computer, waxa maamula. Ka dibna riix "Import" button ama jiita iyo hoos u muujinaya TV si aad u furmo suuqa barnaamijka ay.
Marka aad ku shuban oo dhan faylasha, doonaa, waxay ku tusi doonaa sida thumbnails dhanka bidix. Waxaad riix kartaa "↑" ama "↓" si ay u habayn iyo amarka, iyo in la abuuro horyaal oo dheeraad ah si fiican iyaga abaabulo.
2 Edit TV muujinaysaa iyo ka dhigi DVD menu ah (optional)
TV Tani waxay muujinaysaa in DVD gubi sidoo kale siisaa qalab tafatirka anfacaya oo lagu furdaamiyo iyo menu DVD oo lacag la'aan ah. Waxaad u isticmaali kartaa si aad taxane DVD TV more personlized haddii loo baahdo. Si aad u hesho qalab edit ah, riix icon qalin inuu u muujiyo suuqa kala edit ah. Markaas tagi lahayd doorasho: dari subtitles, jar ka soo qayb aan la rabin, qabsato muuqa, dhalaalka, bedelkeeda, iwm
Si loo sameeyo DVD caadadii menu, fadlan guji tab Menu ku saabsan sare ee suuqa kala barnaamijka. Halkan, waxaad dooran kartaa aad jeceshahay template DVD menu iyo double guji si aad u codsato. Ama guji fallaadhiina waxay ka cagaaran inaad kala soo baxdo arrimo menu dheeraad ah oo lacag la'aan ah .
3 Start TV muujinaysaa in DVD gubashadii
Hadda, aad u yimaadeen inay tallaabo la soo dhaafay. Geli disk maran in DVD drive aad. Ka dibna riix Guba si aad u heerka TV, muuqa, iyo xawaaraha ku gubanayso. Ugu dambeyntii, ka dhacay Guba ka furmkidoona muujinaya TV in DVD abuurka. Marka TV muujinaysaa in DVD writting dhamaystiran, disc DVD ee tuurid si toos ah.
Taasi waa! Hadda free download DVD this software gubanaya si ay u abuuraan aad TV muujinaysaa DVD hadda.
Panasonic DVD gubi: Sida loo Guba Panasonic Video inay DVD